Sarotra ny nenti-manana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tantsoroka Covid-19 Madagascar
Sarotra ny nenti-manana
Nanao tatitra mikasika ny "Tantsoroka Covid-19 Madagascar" notontosaina tao anatin’ny enim-bolana tao Amparibe ireo tompon’andraikitra tamin’izany hetsika izany ny alatsinainy 25 janoary 2021 lasa teo. Indray mihelatra.
Inona ilay hetsika ?
Ny Tantsoroka Covid-19 Madagascar dia hetsiky ny fiarahamonim-pirenena izay nitondrana tohana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny olona marefo. Naharitra enim-bolana ny hetsika. Nisy koa ny famokarana fandaharana maro sy fanangonana tononkalo avy amin'ireo onjam-peo niara-niasa tamin'ny hetsika.
Lafiny telo no nitondran’ny mpanentana ny hetsika ny famintinana ny ezaka natao. Voalohany ny tohana ho an’ny mpitsabo, faharoa ny fanabeazana tamin’ny alalan’ny radio sy ny haino vaky jery, ary ny fahatelo dia tohana ho an’ireo tena marefo. « Manentana ny tsirairay hitondra ny anjara biriky hanao hatrany izay ady tsy hiparitahan’ny aretina covid-19 sy ny coronavirus » hoy Raveloarimisa Mbolatiana, mpandrindra ny hetsika Tantsoroka Covid-19 Madagascar.
Ireo zavatra nanahirana
Betsaka loatra ny filana hita teny amin’ny fiaraha-monina nandritra ireny ady natao tamin’ny coronavirus ireny, izany hoe na tany amin’ny hopitaly na teny amin’ny Csb dia hita fa tanam-polo no nentin’ireo mpiasan’ny fahasalamana niady. Izany no isan’ny nanoloran’ny Tantsoroka Covid-19 Madagascar fitaovana ho fiarovana ary fitaovana entina manadio ny toeram-pitsaboana (hopitaly, csb...), ny tsena na koa ireo toerana ahitana olona maro.
Teo ihany koa ny fiarovana ireo olona niasa nanatanteraka ny tantsoroka, manana ny fianakaviany izy ireo, nifanerasera tamin’ireo olona misehatra tamin’ny fitsaboana ny covid-19. Natahorana tokoa ny ho mety nahazoan’izy ireo ity aretina ity satria dia nivezivezy sy nifanerasera tamin’ny toerana mety ahitana ny valan’aretina, ary tena nisy mihitsy aza ireo voa.
Sarotra ny enti-manana, fa afaka niasa ihany ny tantsoroka niaraka tamin’ny OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) izay namatsy vola ny hetsika.
Tokony mbola hitohy ny tantsoroka amin’izao saingy lazaina fa efa milamindamina ny eto Madagasikara dia lasa any amin’ireo firenen-kafa mbola manahirana ireo mpamatsy vola.
Rehefa jerena ireo tarehi-marika dia hita fa miakatra tsikelikely iny isan’ireo olona voan’ny ity aretina Covid-19 ity amin’izao fotoana. Tsara ary tsy mahafaty antoka ny manaraka ny fepetra rehetra iadiana amin’ity aretina ity. Mila mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay fa tsy hiandry efa sarotra ny ady vao hanao izay tokony hatao.